Nagu saabsan - Zhejiang Jiuerjiu Chemicals Co., Ltd.
Si loo hirgeliyo guud ahaan howlgelinta nidaamka dib-u-habeynta shirkadda iyo iyadoo la raacayo hannaanka shaqo ee shirkadda, subaxnimadii Maarso 2, 2021, waxay shirkaddu ku qabatay dabaqa labaad ee xafiiska “Shirka Waqtiga Dib-u-habeynta Maareynta Waqtiga Dheer”. Guddoomiyaha shirkadda Mr. Chen Jincai iyo madaxweyne ku xigeenka Wang Xiaoli Ms. Tang Xiangyang, madaxweyne ku xigeenka wax soo saarka, Mr. Wang Ming, aasaasaha Chengdu Mindao Enterprise Management Consulting Co., Ltd., Mr. Liu Jing, hogaamiyaha Kooxda mashruuca Mindao, iyo Mr. He Zongkun, tababaraha la taliyaha kooxda mashruuca Mindao, ayaa ka soo qayb galay kulanka, iyo hogaamiyaha kooxda shirkada iyo maamulka sare Wadarta 37 qof ayaa ka soo qayb galay kulankan, oo uu gudoominayey Wang Chao, maareeyaha waaxda wax iibsiga.
Ugu horreyntii, Mr. Liu, oo ah hoggaamiyaha mashruuca Mindao, ayaa hadal jeediyay: Mr. Liu wuxuu sharraxay macnaha dhabta ah iyo jihada ay shirkaddu u beddelayso muddo ka dib afarta dhinac:
1. Maxaa loo beddelayaa: Warshaduhu way sii wadi kartaa inay shaqeyso oo ay hesho meel horumarineed oo wanaagsan, shaqaaluhuna waxay sare ugu qaadi karaan isku-kalsoonidooda saldhigga barnaamijkan.
2. Waa maxay isbeddelka: isbeddelka fikradda, dabeecadda, iyo maaraynta. Hawlaha ganacsiga waa la jaan-qaadi karaa, habeyn-u-janjeedha, oo habeysan.
3. Sida loo beddelo: Adeegso habka 7-tallaabo ee Mindao ah si aad u hirgeliso isbeddelka illaa dhammaadka.
4. Isfaham la’aanta isbeddelka: iyada oo loo marayo hordhaca 5 ismaandhaaf, si loogu oggolaado shirkadda inay hesho horumarka ugu wax ku oolka badan ee ku saabsan waddada saxda ah ee isbeddelka muddo kadib!
Macallin Wang Ming oo ka socda shirkadda Mindao ayaa hadal jeedisay: Haddii waddan ama shirkad ama xitaa shaqsi doonayo inuu xoog yeesho oo uu doonayo inuu sii wado horumarka, waxaa jira oo keliya horumar joogto ah oo horay loogu socdo. Hadday fadhiisato, waxaa go’aaminaya taariikh, bulsho iyo suuq haddii uu halkiisii ​​ku sii jiro. Tirtir! Farxadda had iyo jeer waxaa loogu talagalay carruurta ama dadka qaarkood! Haddii aad rabto inaad noqoto qof xoog leh, qof guuleysta, waa inaad shaqo adag qabataa!
Iyada oo loo marayo filimka iyo taxanaha telefishanka "The Great Qin Empire-The Shang Yang Reform", Mudane Wang Ming wuxuu noo sheegay muhiimadda ay leedahay isbeddelka shirkadda muddo kadib.
Dib-u-habeynta Shangyang waxay ahayd mid ka mid ah dib-u-habeyntii ugu guulaysatay Shiinaha qadiimiga ah. Looma tirtirin dhimashadii Shang Yang darteed, laakiin wuu sii waday. Marka laga eego aragti yar, Dib-u-habeynta Shangyang waxay ka dhigtay waddanka Qin mid adag oo leh midnimada lixda waddan. Caasimad, awoodda Qin waa mid aan laga sooci karin taageerada Shangyang Reform. Marka laga eego guud ahaan, Dib-u-habeynta Shangyang ee Qin waxay gacan weyn ka siisay dib-u-habeynta jiilalka dambe.
Isbedelka shirkaddu waa inay shirkadda ka dhigto mid xoog badan, waxaana jira boos badan oo lagu horumarin karo suuqa xabagta degdegga ah! Kumanaan faynuus ah ayaan la mid ahayn shucaaca qorraxda, oo markii waagu dillaaco, dhammaanba qiiqii waa la xaaqi doonaa. Kaliya markaan si geesinimo leh ugu sii socono wadada isbedelka waxaan ku heli karnaa berri ka wanaagsan!
Khudbadda Mr. Chen wuxuu tilmaamay jihada isbeddelka isla mar ahaantaana wuxuu xoojiyay go'aanka isbeddelka. Badanaa way adagtahay in la sameeyo waxa saxda ah maxaa yeelay waxay beddeli kartaa waxyaabaha laga filayo kuwa leh, sidaas darteed go'aan adag ayaa loo baahan yahay. Waqti ka dib, isbeddelka shirkadda dhab ahaantii waa caqli-guul u dhexeeya shirkadda iyo shaqaalaheeda. Haddii shaqaaluhu fahmi kari waayaan, waxay ka dhigan tahay inay jirto dhibaato xagga fahamka xagasha iyo dhererka. Wax weyn ka tari mayso horumarka shirkadda. Rajo sare lama saari karo, waxna lagu biirin karo mustaqbalka. xaddidan. Marka waxa inala gudboon waa inaan ka gudubno dhammaan caqabadaha ku saleysan caqliga salka ku haya, oo aan horay ugu sii soconno, iyadoo la raacayo habka horumarsan, qof ayaa hubaal raaci doona! Berri hubaal waad ku mahadsan tahay maanta, waad ku mahadsan tahay la socoshada shirkadda waqti ka dib oo aad ka qayb qaadatay isbeddelkan! Kora oo horumar wada samee shirkadda waqti ka dib! wada shaqee! Wada faraxsan!
Ugu dambeyntiina, oo uu hoggaaminayey Mudane Chen! Dhamaan kaqeybgalayaashu waxay si wada jir ah u aqriyeen una saxiixeen “Warqada Ballanqaadka ee Isbadalka Shirkadda”. Dhaarta weyn ee sharafta leh, dib-u-habaynta shirkaddu waxay si rasmi ah u bilaabantay.